Bosaso: Maamulka rugta ganacsiga Puntland oo la kulmay ganacsato ajanabi ah – Puntland Chamber of Commerce
Bosaso: Maamulka rugta ganacsiga Puntland oo la kulmay ganacsato ajanabi ah
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	25th March 2015
Iyadoo todobaadkii la soo dhaafay deegaanada Puntland ay ku sugnaayeen ganacato ajanabi ah oo qorshahoodu yahay inay maal gashadaan Puntland ayaa waxa ay habeenkii xalay la kulmeen maamulka rugta ganacsiga iyo ganacsato.
Kulanka ayaa ka dhacay hotel Jubba ee magaalada Bosaso, waxaaana ka soo qeyb galay maamulka rugta ganacsiga iyo wershadaha Puntland, ganacsato, xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland, agaasimaha guud ee hay’adda macdanta Puntland Ciise Dholawaa iyo marti sharaf kale.
Kulankan intii uu socday waxyaabaha looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa in ganacsatada iyo maalgashadayaasha sidii ay uga faa’ideysan lahaayeen fursadaha ganacsi ee ka jira Puntland.
C/raxmaan Warsame Jaamac oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa kulan ka sheegay in deeganada Puntland ay ka jiraan fursado ganacsi oo badan, isla markaana loo baahan yahay in maal gashi lagu sameysto.
Waxa uu intaasi ku daray gudoomiyaha rugta in Puntland ay tahay meel nabdoon, isla markaana ganacsigeedu yahay mid xor ah cid kasta oo rabta in ay ganacsi ama maalgashiba waynu soo dhaweynaynaa.
Ganacsatadan soo gaaray Puntland oo ka soo jeeda dalka Shiinaha ayaa magaalada Garowe horey ugula soo kulmay madaxweyne C/weli Maxamad Cali Gaas, iyadoo intii ay ku sugnaayeen magaalooyinka Puntland ay booqdeen goobo ganacsi oo muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee maamulka rugta ganacsiga iyo xukuumadda Puntland ayaa ku hawlan hormarinta ganacsiga Puntland.